Mpanamboatra sy mpamatsy amina labiera PET ambongadiny | Copak
Kibon'ny zava-pisotro PET
COPAK-Kopy zava-pisotro PET. Afaka fantatsika amin'ny anarany fa ny fitaovana dia PET (Polyethylene Terephthalate), ary ampiharina indrindra amin'ny famonosana zava-pisotro izy io.
Nahoana isika no mampiasa PET? Ity kapoaka ara-materialy ity dia nivoaka tamin'ny 2000 tany Sina. Ny fitaovana, Polyethylene Terephthalate (PET), dia sariaka amin'ny tontolo iainana, mazava loko toy ny kristaly ho an'ny fahitana mihamitombo ary afaka manome mateza tsara.
1.Color: Crystal-clear, na vita pirinty manokana
4. Fampiasana: zava-pisotro mangatsiaka / zava-pisotro / Ice cream / Ronono / Tea / kafe / dite / Juice / bubble / Cola santionany / labiera / tokotany / kafe / divay / sundae / voankazo / vatomamy / Milkshake / salady / paty
8. Temperature fampiasana: maharitra sy mahatohitra crack, fanoherana ny vata fampangatsiahana
COPAK'S Kopy zava-pisotro PETmatanjaka, mateza ary manintona. Azonao atao ny mamolavola endrika na habe amin'ny lamaody. Efa an-taonany maro isika no nanao an'io sehatra io. Ny habetsahana sy ny habeny ananantsika ankehitriny dia miovaova. Azonao atao ihany koa ny misafidy amin'ny katalaoginay.
Ampifanaraho amin'ny a Kaopy fisotroana PETampidiro sy fonony dia omena mba hamoronana fonosana feno lafin-javatra maro lafatra eny am-pandehanana. Fitaovana enta-mavesatra ihany koa. Izy io dia azo atsipyKaopy fisotroana PET, rehefa avy nankafy ny zava-pisotro ianao, atsipazo fotsiny amin'ny vovoka. Saingy azo averina 100% izy io.
NY Kopy zava-pisotro PETdia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fisotroana mangatsiaka toy ny bar, trano fisakafoanana ary fivarotana kafe ary fivarotana dite Boba erak'izao tontolo izao. COPAK'SKaopy fisotroana PETdia fanarahan-dalàna 100% amin'ny satan'ny Sakafo. Ny fizotry ny famokarana rehetra dia vita amin'ny atrikasa madio tsy misy vovoka ary nandalo ny fanamarinana FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001.
Tongasoa eto hitsidika ny orinasanay. Vantany vao miara-miasa aminay ianao dia ho azonao ny atao hoe tombony fandresena.
Tags tags: Kaopy fisotroana PET, Kilasy sakafo, tombony handresy, zava-pisotro mangatsiaka.
Teo aloha: Milkshake Cup
Manaraka: Cup mazava PET
Kopa sy saron'omby PET Wholesale ambongadiny kapoaka PET Cup Kopazy PET 、 Kopazy Milkshake PET 、 Kofy PET Portion Miaraka amin'ny sarony Sm Kapeo malefaka PET 、 Kopa PET vita pirinty 、 Koban'ny PET 98mm PET Koban'ny PET manokana 、 Kopa PET sy sarony Wholesale Wholesale Cups Wholesale
Tompon-kena jus PET